Gbasara anyị - Dongguan Dongwangda nkenke Technology Co., Ltd.
DongguanDongwangda nkenke Technology Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ dị elu nke nwere ọtụtụ afọ nke ahụmịhe nke ụlọ ọrụ ma bụrụ ọkachamara na mmepụta nke nnukwu iwu maka ntinye R & D, imewe, nhazi CN ziri ezi, na nhazi mpempe akwụkwọ nhazi. Ndị ọkachamara nke ụlọ ọrụ ahụ enwetawo ahụmịhe na imepụta ihe bara ụba na teknụzụ nrụpụta mara mma; Anyị na-enye ọrụ ndị ọkachamara na nkwado teknụzụ maka ndị ahịa n'ọtụtụ ọrụ, ọkachamara na ngwa ngwa ngwa ngwa, ngwa ngwa dijitalụ, ngwa kọmputa, ngwaahịa nchekwa ndị agha, akụrụngwa ahụike, kichin, ihe eji egwuri egwu, ngwa ngwaike Ọdịdị nlereanya, imewe na nhazi ihe nhazi, wdg. mmepụta ihe.
Dongguan Dongwangda nkenke Technology Co., Ltd. emi odude ke ọwọrọetop obio ke China. The isi ngwaahịa bụ: zinc alloy n'aka nlereanya, n'aka nlereanya, n'aka nlereanya nhazi, n'aka factory, aluminum alloy nhazi, nkenke na mgbagwoju aluminum alloy, ogbe ngwaahịa nhazi, mgbagwoju nkenke akụkụ Nhazi osisi, mfe ebu Ndinam osisi, wdg The ụlọ ọrụ bụ kwadebere n'ụzọ dị elu ọnụ ọgụgụ CNC machining emmepe, lathes, -egwe ọka, egwe ọka, icheku ọkụ igwe, agụụ ebu na ndị ọzọ elu akụrụngwa, na a pụrụ ịdabere na àgwà, ezigbo Ọdịdị, na ngwa ngwa prototype ụdị. Ọ na - enye ndị ahịa ohere ịkwalite ngwaahịa nke ha ma were ohere azụmaahịa. Ndi otu anyi n’ile oru anya bu ntorobia, gbasie ike ma na-aru oru. Anyi nwere ndi oru nwere nlezianya na nlezianya anya, ebe oru anyi di ocha. Ihe ndị a niile na-enye mmụba zuru oke maka imepụta ụdị ụdị ọkaibe ọkaibe.
The ụlọ ọrụ ugbu a nwere a ụda azụmahịa management usoro, mgbe niile na-ewusi esịtidem management, mma oru larịị na management ike nke ndị ọrụ, na "enweta nkwanye ahịa 'ntụkwasị obi na mma, merie ndị ahịa obi ike na technology, enweta nkwanye ahịa afọ ojuju na ọrụ, na-enweta nkwanye ahịa na ezi obi "" Ime ihe ọma "bụ ebum n'uche ndị ọrụ m niile; "High arụmọrụ, magburu onwe ya mma, quasi-nnyefe oge, ahịa afọ ojuju" bụ otu olu development direction niile m ibe. Ekwenyere m na ọ bụ naanị ntọala siri ike nwere ike ịmalite ọganihu. Companylọ ọrụ a anọwo na-agbaso mmụọ nke "ịdị n'otu, ịsụ ụzọ, ịrụsi ọrụ ike na ịga n'ihu" na "ịta ahụhụ, uru ọ bụla, ekele" nkà ihe ọmụma azụmahịa. Dabere na ụkpụrụ nke mmesi obi ike dị mma, ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, nnyefe ngwa ngwa na ọrụ ọrụ, ọ na-ewe ihe okike China dị ka ibu ọrụ ya ma mepụta nchekwa nchekwa ọhụrụ Ozi nke oge a bụ "nchekwa gburugburu ebe obibi nke akụ na ụba mmepụta ihe, site na ihe ọhụrụ ngwaahịa na mmepụta ihe mmepụta ihe. ". Ndị ahịa nabatara aha ụlọ ọrụ ahụ nke ọma.
Shouban nlereanya-ngwaike, plastic, electronic na ndị ọzọ ngwaahịa imewe na nnyocha na mmepe, Shouban nlereanya Ndinam, ebu imewe na n'ichepụta, ngwaahịa uka mmepụta, akụkụ nhazi, akpaaka na ngwá mmepe. Dongguan Dongwangda nkenke Technology Co., Ltd. na-eji zuru ụwa ọnụ nke CAD / CAM / CAE software: PRO / E, UG, SOLIDWORKS, MASTERCAM, AUTOCAD, na adopts si imewe, laa azu engineering, bughi imewe, prototype mmepụta, ebu Mmepụta na ogbe Mmepụta nke nkwụsị ọrụ na-ebelata usoro mmepe ngwaahịa, na-echekwa ụgwọ mmepe, ma na-eme ka asọmpi ahịa nke ngwaahịa.
1. Hardware sample mmepụta: (Ihe: aluminum alloy, zinc alloy, red ọla kọpa, ọla, magnesium alloy, tantalum, nickel alloy zọ, ekwe, wdg);
2. CNC nkenke aka osisi mmepụta (ihe ABS, PC, eyi, POM, PMMA, PA, PPS, Pee, Bakelite, wdg)
3. Agụụ compounding (obere ogbe) (Ihe: ABS, PC, eyi, PMMA, ịkwanyere, roba, elu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ ihe, wdg);
4. Laser ngwangwa prototyping nlereanya, SLA, SLS;
5. Mfe ebu: tumadi na-eji maka uka mmepụta, obere ebu oghere okirikiri, ọnụ ala ngwaahịa mma na ihe onwunwe arụmọrụ agbanwe agbanwe na iwu ebu;
6. Mkpa ọgwụgwọ dị ka mmanụ spraying, mmiri lacquering, dusting, silk ihuenyo ebi akwụkwọ, electroplating, ọxịdashọn, laser atụ ihe, waya ịbịaru, wdg
1. Industrial ngwaahịa imewe, 3D Ọdịdị imewe;
2. Ugbo ala, ugboala, ugbo ala ndi umuaka, na uzo ndi ozo na uzo di iche iche di iche iche;
3. Ngwaahịa nkwukọrịta dịka ekwentị, igwe fax, ekwentị mkpanaaka, okwu e ji ekwu okwu banyere okwu, na mgbịrịgba ọnụ ụzọ ime ụlọ;
4. Igwe onyonyo, igwe ihe nlekota, igwe ntụ ntụ, igwe mkpofu ọkụ, ihe okike, na ngwa ụlọ ndị ọzọ;
5. dolmụ bebi ụmụaka, ihe osise ntanye, ihe ndozi pụrụ iche maka ụlọ ọrụ eletrọnịkị, ọrụ ọrụ;
6. Mmepụta nke ụdị aluminom alloy metal ụdị prototype, nnukwu aluminum alloy na plastic injection ngwaahịa;
7. Akụkụ igwe dị iche iche, igwe B, ngwa elektrọnik na ngwa ahụike;
8. Mechanical edinam nha nha igbe, SLA ngwangwa prototyping;
9. Agụụ multi-ebu mmepụta, mmanụ ogwu ogbugba, na ihuenyo ebi akwụkwọ, waya ịbịaru, wdg
Dongguan Dongwangda nkenke Technology Co., Ltd.
5 Axis CNC Lathe, CNC machining Center nhazi, CNC Aka Board nhazi, Igwe anaghị agba nchara nhazi, Machinery Equipment Shell, CNC nkenke Parts nhazi,